बानेश्वरदेखि झापाको चारआली सम्म बैंक हाँक्ने महिला, ग्लोबलमा मात्र १६ शाखा प्रबन्धक – MeroOnline Khabar
बानेश्वरदेखि झापाको चारआली सम्म बैंक हाँक्ने महिला, ग्लोबलमा मात्र १६ शाखा प्रबन्धक
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला आकर्षण बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई करिअर बनाउने महिलाको संख्या विगतको तुलनामा बढे पनि नेतृत्व तहमा भने कम छ । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाहरू उकालो चढ्दै छन् । यसको उदाहरण ग्लोबल आईएमई बैंक पनि हो । यहाँ महिला र पुरुष कर्मचारीको संख्या लगभग बराबर देखिएको छ ।
बैंकका १ सय ३७ शाखा मध्ये १६ वटामा महिला शाखा प्रबन्धक तथा इन्चार्ज छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ३७ शाखा कार्यालयमध्ये ११ वटामा महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । अन्य जिल्लाका चार शाखा कार्यालय महिलाले हाँकेका छन् । नौ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रलाई करिअर बनाएकी दीपा न्यौपाने काठमाडौंको ज्ञानेश्वर दाेस्राे शाखा इन्चार्ज छिन् । उनले ग्लोबल आईएमईबाटै करिअर सुरु गरेकी हुन् । बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानजनक पेसा भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएको उनी बताउँछिन् ।
यो क्षेत्रमा समान व्यवहार, शैक्षिक योग्यताको कदर र अवसर पर्याप्त भएको उनको भनाइ छ। झापाको चारआली चोक दुवागडीमा मोबिना ढुंगाना, सुनसरी धरानको पुतलीलाइन शाखामा लक्ष्मी डुम्रे ताप्लेजुङ वीरेन्द्र चोकमा ज्योति काफ्ले र तेह्रथुम शाखामा ज्योति केसीले शाखा प्रबन्धकको पद सम्हालिरहेका छन् । केही समयअघि बैंकको फ्रन्ट डेस्कमा मात्र देखिने महिला पछिल्लो समय नेतृत्व तहमा पुग्न थालेका छन् ।
उपत्यकाका बैंकमा कति छन् महिला प्रबन्धक ? कमलादी : प्रतीक्षा ओझा (केन्द्रीय कार्यालय ), डिल्ली बजार श्रुति हाडा, ज्ञानेश्वर दोस्राे : दीपा न्यौपाने, कान्ति पथ : अनामिका सिंह, कीर्तिपुर : शोभा न्यौपाने, कुपन्डोल : रिती शाही
लगनखेल : मेरिना श्रेष्ठ, पानीपोखरी : स्वेच्छा राणा, पुल्चोक : सरोजा हाडा, सातदोबाटो : शमा शाह, सिनामंगल : माला घिमिरे
उपत्यकाबाहिर ग्लोबल बैंकका महिला शाखा प्रबन्धक : झापा चार आली चोक : मोबिना ढुंगाना, धरान पाख्रिन प्लाजा : लक्ष्मी डुम्रे, ताप्लेजुङ वीरेन्द्र चोक : ज्योति काफ्ले, तेह्रथुम म्याङलुङ बजार : ज्योति केसी, चितवन टाँडी, सौराह चोक : विज्जु सुवेदी, स्याङ्जा भोटेओडार : जन्मभूमी गुरुङ, स्रोत : ग्लोवल आइएमई बैंक
← आफैले बनाएको मोटरसाइकल चलाएर कार्यालय जाने “प्रहरी” !
पर्समा सधै राख्नुहोस् यी ५ मध्ये कुनै एक चीज, कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी पूरा पढ्नु होस । →
आफ्नै बावुको गाडीले छोरीलाई किच्यो छोरीको घटनास्थलमै मृत्यु